Umgangatho, abaRhwebi abaRekhoda abaPhicothiweyo abaBini abaDibeneyo, Benziwe e-China-Dongguan Yingjia Electronic Technology Co, Ltd.
Ikhaya >Iimveliso >Isishicileli sokuqhuba imoto>Isishicileli sokuqhuba esineekhamera ezimbini
Ikhamera ye-dvr yemoto eyi-intshi eyi-4.5
Indawo yokuthengisa imveliso inzuzo ye-4.5-intshi 1080P ephezulu-ye-lens ezimbini ze-DVR yekhamera yemoto yikhamera yemoto enexabiso elikhethekileyo kunye nomsebenzi wombono wobusuku obunentsingiselo ephezulu.
Isixhobo sesinyithi esigcwele HD ye-4-intshi yemoto ye-DVR yokurekhoda imoto yokurekhoda ngemoto ngombono wasebusuku isishicileli sevidiyo semoto encinci, uyilo oluphezulu lwenkangeleko yendawo ephezulu, yonke into ikukhuseleko lwakho kuphela.
3 intshi mini camera rekhoda ukuqhuba
I-DVR HD yasebusuku yeyona moto intle kakhulu ukurekhoda imoto encinci ye-3 intshi yevidiyo eyi-1080 yekhamera yemoto, imbonakalo intle kwaye icwecwe, ke ngekhe uyibeke kwikhamera yemoto encinci.
3 intshi WIFI camera DVR
Imveliso yokuthengisa amanqaku amanqaku ama-intshi ama-3 intshi ephezulu yokurekhoda ukurekhoda i-DVR ikhamera ye-WIFI. I-APP iqhagamshele kwirekhoda yokurekhoda yekhamera-mbini, ikhamera yemoto enokujonga indawo kwifowuni ephathekayo. "